घर MANAGERS Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 12, 2017
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रबन्धक प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। 'सामान्य वन''। हाम्रो जर्गन क्लप्प बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। कुनै पनि संदेह छैन, जरुन क्लप्प आफ्नो करिश्मा र स्टार गुणस्तरको लागि चिनिन्छ। जब उहाँले कोठामा हिँड्नु हुन्छ, मानिसहरूले ध्यान दिन्छन्। तपाईं पनि उनको बारे मा थोडा पागलपन हो, सबैले जीवनलाई प्रेम गर्ने तरिकालाई प्रेम गर्दछ।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन जीवन
जर्जन नोर्बर्ट क्लपले स्टटगार्ट जर्मनीमा जनवरी 26th मा जन्मेका थिए, एक्सएनएमएक्स एक पिताको नर्बर्ट क्लोप, जो एक सभ्य शौकिया फुटबलर र आमा एलिसबेथ क्लप्प थियो।
Klopp आफ्नो अधिकांश बचपन को अधिकांश ग्लेटेन को जर्मन ब्ल्याक वन गाँउ मा बिताए जहां उनको र उनको दुई पुराना बहिनीहरु (Isolde Reich र Stefanie Klopp) उसको आमाबाबुले ल्याएको थियो।
क्लप्प सबैको साथ बच्चाको साथमा। उहाँको प्रारम्भिक बचपनको जीवन एक शब्द 'वफादार' को वरपरमा केन्द्रित थियो। उहाँले ठूलो सपना देखाउनुभएन कहिल्यै। उहाँ सधैं एक केटाको रूपमा कम बस्नुहुन्छ। त्यो साँच्चै, उसको बल थियो। आफ्नो देशमा भक्ति र आत्म बलिदान।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -हुर्किरहेका
जर्गन क्लोप (बढ्दो माथि)
एक केटाको रूपमा, Klopp भन्छन् कि उनको के अर्थ छ, र यसको अर्थ उहाँले के भन्नुहुन्छ। तिनका केटाकेटी सपना फुटबलर र उत्कृष्ट फुटबल प्रबन्धक हुन्थ्यो।
उनको फुटबल सपना सुरू भयो जब उनले 16 को उमेर मा आफ्नो स्थानीय जर्मन समुदाय टीम Ergenzingen मा शामिल हो। त्यो खेल देखि वफादार थिए। उनीप्रति वफादारी भनेको जर्मनीको मायालु देशमा यो ठूलो सपना पूरा गर्नु हो।
जर्गन Klopp जब त्यो धेरै छोटा थियो सिक्न कहिल्यै आफूलाई आफैलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन, र सबैको मजाकको पक्का हुन खुसी छ। उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि चीजहरू सधैं आफ्नो बाटो जान सक्दैन, तर उसले आफैलाई उठाउँछ र फेरि प्रयास गर्दछ। उहाँले उनीहरूलाई कुनै पनि दृश्यमा फ्याँक्नुहुन्छ जब उनी आराम गर्दछ। असल केटाको रूपमा, उहाँले सधैं आफ्नो घरको कंधामा राख्नुहुन्छ। उहाँले कार्य गर्नुभन्दा अघि सोच्नुहुन्छ, र उसलाई भावनाले उहाँलाई भन्दा उत्तम प्राप्त गर्न अनुमति दिदैन।
जर्गन क्लप्पको केटाकेटी सपना अन्ततः सत्य भएको थियो किनभने उनको क्षमतामा फुटबलर र जर्मनीको उत्कृष्ट फुटबल प्रबन्धक दुवै देखियो।
जर्गन क्लप्प अर्ली फुटबल क्यारियर
क्लप्पले म्यान्ज एक्सएनमक्समा उनको अधिकांश 15-वर्ष खेलकुद क्यारियर बिताए। उहाँले 05 मा दायाँ फिर्ता डिफेंडर कन्वर्ट गर्न क्लब को लागि एक स्ट्राइकर शुरू गर्यो। उनले मेनजको लागि कुल 1995 लीग लक्ष्यहरू बनाए।
उनको सेवानिवृत्तिको लागि खेल्दै Mainz 05, Klopp 27 फेब्रुअरी 2001 मा क्लब को प्रबंधक को रूप मा नियुक्त गरे को रूप मा नियुक्त गरे Eckhard Krautzun। उहाँ सात वर्षको लागि प्रबन्धक बनेर, कुन समयमा उहाँ टोलीले यसको पहिलो उपस्थितिमा नेतृत्व गर्नुभयो बूंदेस्लिगा, र लागि योग्यता 2005-06 UEFA कप.
2008 मा, Klopp सामेल भयो बोरुसिया डर्टमन्ड, तिनीहरूलाई फिर्ता फिर्ता बन्डेस्लेगामा जित्छ 2011 र 2012, साथै DFB-Pokal in 2012, को DFL-Supercup in 2013 र 2014, र तिनीहरूको दोस्रो उपस्थितिमा यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तिम मा 2013.
Klopp जीता जर्मन फुटबल प्रबन्धक को वर्ष in 2011 र 2012, 2015 मा डर्टमन्ड छोड्नु अघि, उनीहरूको सबैभन्दा लामो सेवा गर्ने प्रबन्धक पनि भयो। उहाँ प्रबन्धक हुनुभयो लिभरपूल अक्टोबरमा 2015। उनी प्रीमियर लीगमा व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्र दोस्रो जर्मन हो। पहिलो फेलिक्स मगथ थियो जसले 2014 मा फुलहम को प्रभारी गरे।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आमाबाबुले
जर्गन क्लप्प को आमा एलिसबेथ क्लप्प, एक पल्ट ले भन्यो: "मेरो छोरा सबैको साथमा जान्छ। उनले गर्मीमा बाहिर खेतमा खेल्ने फुटबल खेल्थे र जाडोमा बस्ने कोठामा गोल गरे। "
जर्गन क्लोप र आमा, एलिसिबेथ क्लोप
यो कसरी उनी सबैको लागि छोराको सफलता वर्णन गर्दछ। उनीहरूले प्राय: उनीहरूलाई एकअर्काको कोषमा बनाउँदछन्।
Klopp को अनुसार, "मेरा आमाबाबु दुवै दुई फरक ग्रह थिए। आमाले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, बुबा धेरै छैन। तर निस्सन्देह तिनले सल्लाह दिने प्रयास गरे र उनले मलाई राम्ररी प्राप्त गर्न को लागी आगो निर्माण गर्न खोजे र छिटो सन्तुष्ट हुनु र यसका चीजहरू "।
आफ्नो पूर्व फुटबलर र विक्रेता पिता, जो स्की र टेनिस खेल्न पनि सिकाउनुभयो को बारे मा कुरा गर्दै, Klopp ले भन्यो: "मेरो भाग्य थियो कि म सधैँ चाहन्थे जुन उसले चाहन्थे।" मलाई उसलाई सम्झदै सधैं सम्झन्छु, "लोहाले मानिसलाई लोभ्याउन लोहेलाई तान्छ।"
क्लप क्यान्सरको साथ दुई-वर्षको युद्ध पछ्याउन नर्बर्टको उमेरमा एनएनएक्सएक्समा मृत्यु भएको थियो जब हजुरआमाले भने, खासगरी उनको पिताले 2000 मा डर्टमुन्डमा टिम कोच भएन।
जर्गन क्लोपको बुबा, नर्बर्ट क्लप्प
मृत्यु पछि Klopp 20,000 प्रशंसकहरु लाई उनको आंसू स्ट्रीमिंग संग आँसू संग संबोधित र भन्यो: "म सबै कुरा हुँ, म सबै हुन सक्छु, तपाई मलाई पितालाई दिनुहुन्छ। म अझै पनि सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं माथिबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। "
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
Klopp एक तलाक हो। उनले विभिन क्लप्पसँग विवाह गरेका थिए जसको साथ उनको पास छोरा मार्क छ, जसले डर्टमुन्डको लागि खेलेका थिए तर उनीहरूले खेलमा सेवानिवृत्त गर्नका लागि ठूलो चोट झन्झट गरे। क्लप्प र उनको पूर्व पतिघरले प्रारम्भिक 2001 मा विभाजित गर्न निर्णय गर्यो।
जर्गन क्लप्प र पूर्व पत्नी; Sabine Klopp
तिनीहरूसँग एक छोरा मार्क, 26, जसले हालै फुटबलबाट रक्षकको कारण सेवानिवृत्त भएको थियो। क्लोप 2001 मा क्लब प्रबन्धक भए पछि दम्पतीले विभाजित गर्यो।
उनले मेजर 05 मा प्रभारी हुँदा उनले आश्चर्यजनक उल्लालाई भेट्थे र उनी स्थानीय पट्टीमा भिट्रेस थिए।
Klopp भन्छन् कि उनले तथ्यलाई मन पराए कि प्रशिक्षित शिक्षक, जो एक छोरा डेनिस, 27 छ, उनको पहिलो विवाहबाट, "फुटबल प्रशंसक थिएन र मलाई थाहा छैन। मैले त्यो आकर्षक भेटें "।
जोडीले 2005 मा विवाहित र अब डर्टमुन्ड बाहिर बाहिर एक शान्त गाँउ हेरेडेक मा बस्छन।
जर्गन क्लोप र पत्नी, उल्ला
तर उनीहरूले शोबिजको ​​जीवन शैलीलाई मन पराउँछन् र साइल्टको उत्तर सागरको द्वीपमा आफ्नो चिन्तित छुट्टीको झण्डामा पत्रिकाहरू प्रस्तुत गर्छन्। जरुन र उल्ला मेनज मा एक पल्ट भेट भयो जहाँ Bundesliga पक्ष Mainz 05, जुन क्लोप प्रबन्धक थिए, नियमित रूपमा मनाईयो। उल्ला एक वेट्रेस थियो र न त फुटबलमा रुचि राखेन र न त थाहा थियो कि क्लोप थियो, तर यद्यपि उनी सोचेका थिए। डिसेम्बर 2005 मा विवाहित जोडी उल्ला र जर्जिन दुवै विवाहित थिए र प्रत्येकले एक छोरालाई सम्बन्धमा ल्याउछ। जर्जनको छोरा, मार्क, बोनसिया डर्टमुन्डको लागि खेल्नु भएको छ जब सम्म उनि 2012 मा बस 23 मा सेवानिवृत्त भयो
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -धर्म
Klopp एक ईसाई हो, मलाई भन्न चाहन्छु, र म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु। उनको ईसाई दृष्टिकोणले हामीलाई मात्र यो एक जीवन छ भनेर अस्वीकार गर्छ र हामीले यो भन्दा राम्रो बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। Klopp को अनुसार, 'म के गर्ने प्रयास गर्छु। म मेरो शुभकामना दिन प्रत्येक दिन मजा गरिरहेको छु जस्तै यो अन्तिम हो। म मनपर्ने, पिउने वा जुनसुकै कारणले मज्जा लिनु भो भोलि अन्त हुन सक्छ.
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -तल पृथ्वी जीवन शैली
शानदार कारहरू खरीद गर्नुको सट्टा, जुङ्गेन क्लप्पले फुटबल म्याच पछि आफ्नो घरको रेल तालिम लिइरहेका छन्। रेलबाट जोगिन पछि, क्लप्पले लामो समयसम्म घर जान्छ। उनले स्वीकार गरेका छन् कि म्याग्दीहरु पछि राम्रो तरिकाले सोचेका बारे सोच्न पछि उनीहरु घर घुमाउँछन्।
किन जर्गन क्लोपले रेलहरू मन पराउँछन्।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -शिक्षा
उनको खेलकुद क्यारियर को समयमा, क्लप्प फ्रैंकफर्ट को गोते विश्वविद्यालय बाट खेल विज्ञान मा डिप्लोमा कमाई। केहि आश्चर्यजनक कुरा, उनको थेसिस फुटबल भन्दा सट्टा दौडमा ध्यान केन्द्रित भयो।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कपाल प्रत्यारोपण
क्लप्पले 2012 मा वेन रुनी जस्तो एक बाल प्रत्यारोपण गरेको थियो र कसरी यो बाहिर निस्केर धेरै गर्व छ।
Jurgen Klopp Beard Story
साक्षात्कारमा पत्रकारहरूलाई कुरा गरिरहेको बेला उहाँले यसो भन्नुभयो: "हो, यो सत्य हो। मैले एक बाल प्रत्यारोपण गरें। मलाई लाग्छ परिणामहरू साँच्चै राम्रो हुन्छन्, के तपाईं? "
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उत्सव शैली
6.4 पैदल मानिस एक धेरै भावुक उत्सव छ भनेर जान्छ।
जर्गन क्लप्प मनाउने शैली
यो एक मजाकिया नृत्य गरिरहेको छ कि, घाँस भर उनको घुटनों मा फिसलने वा आफ्नो खेलाडी चुम्बन लिभरपूल प्रशंसकको खेल को रूप मा गली बाहिर देख्न को रूप मा धेरै मजेदार हुन सक्छ। एक पटक एक प्रसिद्ध उत्सव को समयमा एक मांसपेशिहरु लाई पनि Klopp को पनि लाग्यो।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -चीजहरू फरक फरक मनपर्छ
जब बोरुसिया डर्टमन्डले 2014 मा आर्सेनल विरुद्ध उनको च्याम्पियन लीगको खेलको तयारी गर्दै थिए, क्लपले अमीरात स्टेडियममा प्रशिक्षित गर्ने मौका पाए र उनको टोलीले बरु लन्डनको रेगेन्ट पार्कमा लैजान थाले।
Jurgen Klopp प्रशिक्षण स्टाइल
बच्चा स्टोरीहरूको सर्वश्रेष्ठ
तपाईंको लागि थप स्टोरीहरू
डिसेम्बर 3, 2017
नाबी केता बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Sokratis Papastathopoulos बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
डिसेम्बर 5, 2018